Min Min Oo – The Martyrs of Democracy (2021) – Civilised Forums of Myanmar Community
Mar 21, 2021 1:07 am
Grade-10 student(Mg Min Min Oo) was reported dead by torturing. He got shot at legs & arrested by terrorists on Mar 14, MyaTaung strike. When his family tried to meet with him, they only showaphoto of his death & cremated the dead body on their own.
Mar 22, 2021 1:10 am
အလောင်းဖျောက်ခံထားရသည့် ၁၆ နှစ်သားနာရေးအခမ်းအနား
ဧရာဝတီ၊ မတ် ၂၀၊ ၂၀၂၁
မန္တလေးမြို့တွင် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ၄၁ လမ်း၊ ၈၃ လမ်းနှင့် ၈၄ လမ်းတွင် ဆိုင်ကယ်စီးလာသည့် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မောင်မင်းမင်းဦးအား စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များက သေနတ်ဖြင့် ဝိုင်းဝန်း ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီး ရုပ်အလောင်းအား စစ်ကားဖြင့် သယ်ဆောင်သွားပြီး ဖျောက်ထားသဖြင့် မိသားစု၏ နေအိမ်တွင် ရုပ်အလောင်းမရှိဘဲ နာရေး အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။